3 ayaa ku dhintay Qarax Nairobi - BBC News Somali
3 ayaa ku dhintay Qarax Nairobi
Image caption Qof ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa Nairobi
3 qof ayaa ku dhintay qarax bam oo Nairobi ka dhacay. 74 kalena waa dhaawac.
Qaraxu wuxuu ka dhacay dibad bax ay soo qabanqaabiyeen ururada diinta Masiixiga ee ka soo horjeeda dastuurka qabyada ah ee cusub ee Kenya, kaasi oo lagu qabanayay fagaaraha xoriyadda ee Uhuru.
Isbitaalada magaalada Nairobi ayaa xaqiijiyay dhaawaca 74 qof, iyada oo la sheegay in lix ka mid ah ay aad u liitan.
Kooxo ka soo horjeeda iyo kuwo taageersan dastuurka qabyada ah ayaa ku kala qabanayay banaanbaxyo balaaran qeybo kala duwan oo ka tirsan dalka ka hor inta aan codbixinta dadka loo qaadin bisha August ee sanadkan.
Inta badan kaniisadaha Masiixiga ah, ayaa ka soo horjeeda dastuurka cusub, sababtoo ah waxa ku jira qodobbo ka hadlaya in ilmaha uurka hooyada ku jira la iska soo ridi karo iyo maxkamadaha qaadiga ee Muslimiinta.